ရှဲဒိုးရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသားလေးမျက်နှာမငယ်ရအောင် စေ့စပ်တောင်းရမ်းပွဲလေးကိုကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ ကောင်းကျော်တို့အဖွဲ့ - Myanmarload
ရှဲဒိုးရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသားလေးမျက်နှာမငယ်ရအောင် စေ့စပ်တောင်းရမ်းပွဲလေးကိုကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ ကောင်းကျော်တို့အဖွဲ့
လွန်ခဲ့သော ၈ လ က 09:18 November 04, 2019
ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကို ဟာသလေးတွေနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်း ဝိုင်းချစ် ရှဲဒိုး ကောင်းကျော် ထက်ထက် တို့က ဟာသလူရွှင်တော်တွေအဖြစ် တစ်ခေတ်တစ်ခါမှာအရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေညီကိုအဖွဲ့ထဲမှ ရှဲဒိုးဟာဆိုရင် လူ့လောကကိုအပြီးတိုင်စွန့်ခွာသွားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကလည်းတသသနဲ့လွမ်းမောရသလို ငြိမ်းချမ်းတို့ညီအစ်ကိုတွေကလည်း ရှဲဒိုးကို တစ်နေ့မှမေ့မရပါဘူးနော်။အခုဆိုရင်တော့ ကောင်းကျော်တို့တွေက ရှဲဒိုးရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသားလေးအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းလေးကို အောက်ပါအတိုင်းရေးသားထားပါတယ်နော်။
Photo Credit:Kaung Kyaw's Facebook
"သို့ တမလွန်က သူငယ်ချင်း ရှဲဒိုး ???ဒီနေ့ မင်းရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသားလေးကောင်းဇင်ဟိန်းရဲ့ အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လို့ သူချစ်တဲ့ ချစ်သူလေးကို စေ့စပ် တောင်းရမ်းတဲ့ ပွဲလေးကို မင်းကိုသိပ်ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ မင်းကိုယ်စား မင်းသားလေးမျက်နှာမငယ်ရအောင် သွားပြီး စေ့စပ် တောင်းရမ်းပေးခဲ့တယ်နော် သူငယ်ချင်း ??တို့အထဲက အကိုအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ကိုငြိမ်းချမ်းကတော့ ရုတ်တစ်ရက် ဖျော်ဖြေရေးပေါ်လာလို့ မလိုက်ပါနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ကွာ မင်းရဲ့ကိုယ်စား မင်းရဲ့ သားငါတို့ရဲ့ သား ကောင်းဇင်းဟိန်းအတွက် ငါတို့ တတ်နိုင်တာလေးတွေ လုပ်ပေးတယ်နော်သူငယ်ချင်း"
"ဒီပွဲမှာ ငါတို့ မင်္ဂလာစကားပြောနေတော့ မင်းသိပ်ချစ်တဲ့ မင်းမိန်းမ သက်မွန်ညွန့် ခေါ် မလှလှညွှန့် မင်းကိုသတိရပြီး မျက်ရည်တွေ ကျနေတာမြင်ရတော့ ငါတို့ပါမျက်ရည်မကျမိအောင် ထိန်းခဲ့ရတယ်သူငယ်ချင်းရယ် 10-11-2019 နေ့မှာ မင်းရဲ့သားမင်္ဂလာဆောင်မှာနော် သူငယ်ချင်း အဲ့ဒီရက်မှာ ပွဲတွေ အသီးသီးရှိနေကြလို့ ငါတို့ လာနိုင်ချင်မှ လာနိုင်မယ်သူငယ်ချင်းရေ မင်းကို ကြိုပြီးတောင်းပန်ပါတယ် သူငယ်ချင်းရယ် အခုလဲ ငါတို့လုပ်ပေးနိုင်တာလေးကိုမရှိတော့တဲ့သူငယ်ချင်းအတွက် လုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်သူငယ်ချင်း ရွှေညီကိုအဖွဲ့ရဲ့ ရွှေညီအမ တွေပါ ပါဝင်ပေးခဲ့တယ်နော် သူငယ်ချင်း တမလွန်က အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း ရှဲဒိုး (ခ)လှမြင့် (ခ)သာကျော်(ခ)ကျော်ဆန်း ကျေနပ် ဝမ်းမြောက်ပါသူငယ်ချင်းရေ ကောင်းကျော်(ရွှေညီကို)အဖွဲ့သားဟောင်း 3-11-2019"
Soure:Kaung Kyaw's Facebook